Manjaro 19.0 yave pamutemo, inouya neLinux 5.4 uye idzi dzimwe nhau | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memavhiki akati wandei ebudiriro, Manjaro GmbH & Co KG yatanga Manjaro 19.0, codenamed Kyria. Iyi vhezheni inobudirira a Manjaro 18.1.5 iyo yakavhurwa pazuva rekupedzisira re2019 uye iyo vhezheni inowanikwa kwemaawa mashoma ndiyo yekutanga yegore iyo yatakapinda mazuva maviri gare gare. Kunyangwe iri mune mamwe maratidziro enzvimbo, vashanduri vayo vanoti XFCE ichiri nzvimbo huru yenzvimbo inozivikanwa yekushandisa.
Sezvo nekuburitswa kwese kutsva, timu yekuvandudza yatora mukana wekuvandudza kernel yeiyo inoshanda sisitimu. Iyo kernel inosanganisirwa muManjaro 19.0 iri Linux 5.4, iyo inopindirana neyekupedzisira LTS vhezheni uye imwe iyo mamwe masisitimu anoshanda achasarudzirawo, senge Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa. Zvimwe zvinozivikanwa zvinhu zvitsva zvine chekuita nemamiriro ekunze anoshandiswa neimwe shanduro yeManjaro.
Pfungwa dzeManjaro 19.0
Sezvo isu tichigona kuverenga mu manjaro bulletin board, inoshanda sisitimu v19.0 inosanganisira izvi zvakakosha:
XFCE 4.14. Mune ino vhezheni vakatarisa kupora ruzivo rwevashandisi nedesktop uye nemaneja wehwindo.
Nyowani Matcha theme.
Nyowani Screen Maprofiles basa rinotibvumidza isu kuchengetedza imwe kana akawanda maprofiles eedu atinofarira ekumisikidza skrini. Iko-auto-application yemaprofile yakaitwawo kana mamwe maonerwo akabatanidzwa.
Plasma 5.17, nharaunda yakagadzirwazve kusunungurwa uku.
Breath2 misoro ikozvino inosanganisira yakajeka uye yakasviba modhi, inogamuchirwa mifananidzo, Konsole profiles, Yakuake makanda, uye zvimwe zvakawanda zvishoma zvidiki.
KDE Zvikumbiro zvakagadziridzwa kune yazvino vhezheni (19.12.2).
Zvimwe Manjaro-KDE zvinoshandiswa zvakagadzirwazve kuti zvive zvinehunyanzvi uye zvine mutsindo.
Kubva paGNOME 3.34, ivo vakamonyorodzawo mufananidzo wemaapplication akasiyana siyana uye desktop.
Marongero ekumashure ekumashure akagadzirwazve kuitira kuti zvive nyore kusarudza tsika dzekumashure.
Nyowani pachezvayo inesimba kumashure iyo ikozvino inogoneswa nekutadza.
Manjaro 19.0 yakaziviswa uye kuvhurwa kwayo ikozvino kuri pamutemo. Mifananidzo mitsva yeIO iripo en Iyi link. Manjaro anoshandisa iyo yekuvandudza modhi inozivikanwa seRolling Release, saka vashandisi varipo vachakwanisa kusimudzira kune iyo vhezheni nyowani kubva kune imwecheteyo inoshanda sisitimu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 19.0 Kyria yava pamutemo, neLinux 5.4 LTS uye idzi dzimwe nhau